खोप ल्याउन भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप बनाइरहेको एसआईआईसँग छलफल गर्न बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुखलाई जिम्मा
मंसिर १०, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अदार पुनावालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । पुनावालाले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कोभिड खोपका लागि नेपाल र बंगलादेशलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएपछि यताबाट सम्पर्क सुरु गरिएको थियो ।
खोप बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एसआईआईले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सस्तो खोप १ सय ७० मुलुकमा आपूर्ति गर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई भर्चुअल बैठक राखेर पुनावालासँग खोपको विषयमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । एसआईआईले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त खोपलाई एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’ नामले निर्माण गरिरहेको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को निगरानीमा यसको परीक्षण चलिरहेको छ । सफल परीक्षण हुनासाथ नेपालमा ल्याउन सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार सीईओ पुनावालासँग केही दिनमै कुरा हुनेछ । यसबारे डा. गौतमले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘२ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने खोपको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘मुलुकका लागि अनुकूल हुने सहज मूल्य वा अनुदानमा प्राप्त हुने डब्लूएचओबाट प्रिक्वालिफाइड वा आकस्मिक प्रयोगका लागि दर्ता भएका कोभिड खोप छिटो आपूर्ति गर्न सम्भावित सबै प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार अत्यन्त चिसोमा राख्नुपर्ने खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्ने खोपको दाँजोमा ३ देखि ६ गुणा महँगो देखिएको छ । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले सामान्य अवस्थामा डब्लूएचओले मान्यता दिएको खोप मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ । आकस्मिक अवस्थामा समेत तोकिएको विशेष प्रक्रिया अपनाउँदै खोप प्रयोग गर्न सकिने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन संशोधन गरिसकेको छ ।
सीईओ पुनावालाले केही खास अवस्थामा ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्डको एक सय मिलियन (१० करोड) मात्रा (डोज) जनवरीबाट उपलब्ध हुने र फेब्रुअरी अन्तसम्म सयौं मिलियन तयार हुने जनाएका छन् । एक डोज खोप फार्मेसीबाट करिब एक हजार भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । तर सरकार (भारत) ले ९० प्रतिशत खोपको २ सय ५० भारुमा किन्न सक्ने पुनवालाले जनाए । यो खोप दुई डोज लगाउनुपर्छ ।
यो खोपलाई धेरै संख्यामा निर्माण गर्न सीआईआईले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै पुनावालाले हाल करिब ४० मिलियन (४ करोड) खोप उत्पादन गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् । यो खोपको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) १ हजार भारु तोकिएको छ । आईसीएमआर र एसआईआईले अर्को खोप ‘कोभोभ्याक्स’ को क्लिनिकल विकासका लागि समेत मिलेर काम गरिरहेका छन् । कोभोभ्याक्सलाई अमेरिकी कम्पनी नोभाभ्याक्सले प्रारम्भिक रूपमा तयारी गरेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार नोभाभ्याक्सले एसआईआईसँग सन् २०२१ मा करिब एक अर्ब मात्रा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
भारतमा जनवरीबाट जोखिम समूहले खोप पाउने सम्भावना
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार अन्तरिम तथ्यांकले कोरोना खोप ७०.४ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । यो दुई चरणमा गरिएको परीक्षणले यो ९० प्रतिशत प्रभावकारी हुन सक्छ ।
अक्सफोर्डद्वारा विकसित खोप माइनस २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । अक्सफोर्डको खोप एउटा भाइरसबाट बनेको छ, जुन सामान्य एडेनो भाइरस (सामान्य रुघाखोकी) को कमजोर संस्करण हो । यसलाई मानिसमा विकसित हुन असम्भव बनाउनका लागि आनुवांशिक रूपले परिवर्तन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको यो खोप आकस्मिक उपयोगका लागि भारतले बेलायतसँग अनुमति मागेको छ । बेलायतले खोप प्रयोग गर्न अनुमति दियो भने भारतमा तेस्रो चरणको परीक्षणअघि नै कोभिसिल्डलाई स्वीकृति मिल्न सक्छ । यसरी सन् २०२१ को सुरुमै भारतका जोखिम समूहले खोप पाउन थाल्ने सम्भावना छ ।
भारतमा परीक्षण सफल भएको खोप नेपालमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल र भारतको हावापानी लगभग उस्तै भएकाले उता परीक्षण सफल भएको खोप यता प्रयोग गर्न सहज हुनेछ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०९:३०
निको हुने दर ९०.३ प्रतिशत
पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण घटेकाले संक्रमितको संख्यामै कमी आएजस्तो देखिएको हो ।
मंसिर ८, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — सरकारी तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ निको हुने दरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । एक सातायता कोभिड निको हुने दरमा ६.९७ प्रतिशत सुधार भएर आइतबार ९०.३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण घटेर संक्रमितको संख्या कम देखिएकाले निको हुने दर बढेको हो । संक्रमितको प्रतिशत भने घटेको छैन ।
केही दिनयता सरदर सय जनाको पीसीआर गर्दा २० जनाभन्दा बढीलाई पोजिटिभ देखिएको छ । आइतबार देशभरि ८ हजार ३२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १ हजार ६ सय ६९ जना अर्थात् २०.७७ प्रतिशतलाई कोभिड देखियो । परीक्षण नतिजामा सय जना कोभिड पोजिटिभ देखिएकामध्ये ३९ जनाभन्दा बढी महिला छन् । ‘कोभिड पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिलाई १४ दिनमा अन्तिम तीन दिन ज्वरो नआए निको भएको मानिन्छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा.सन्तकुमार दासले भने, ‘कोभिड भएर उत्पन्न जटिलताले गर्दा १४ दिनपछि मृत्यु भए पनि त्यस व्यक्तिलाई कोभिड निको भएकै मानिन्छ ।’
केही दिनअघि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.सुनील झाको कोभिड संक्रमणपछि मृत्यु भए पनि उनको मृत्यु कोरोनाले नभएको उनले बताए । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न कोभिड नेगेटिभ भएको प्रयोगशाला प्रतिवेदन नचाहिने उनले बताए । ‘कोभिड बिरामी पोजिटिभ भए पनि अर्कोलाई संक्रमण गर्ने बढी सम्भावना छैन, लक्षण निको हुँदै गएको छ भने डिस्चार्ज गरिन्छ ।’ उनका अनुसार कोभिड भाइरसको कारण शरीरमा उत्पन्न विभिन्न समस्या, जटिलता नहटेसम्म चिकित्सकीय हिसाबले बिरामी निको भएको मानिँदैन ।
कोभिड संक्रमण १४ दिनपछि निको भएको मानिने भए पनि महिनौंसम्म विभिन्न शारीरिक समस्या देखिइरहनेको संख्या उल्लेख्य छ तर ती सबै बिरामीलाई निको भइसकेको भनी गणना गरिने उनले जनाए । ‘अस्पतालमा ६–७ दिन राखेर नेगेटिभ हुन नपाउँदै बिरामीलाई घर पठाउने अवस्था अहिले देखिएको छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा.राजेन्द्र बीसी भन्छन्, ‘अलि सुधार छ, लक्षण कम भएको छ भने डिस्चार्ज गरिन्छ । मैले आफ्नै दुई जना आफन्तलाई शारीरिक जटिलता रहिरहेकै अवस्थामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेको देखेको छु ।’
संक्रमितको लक्षण कम भएपछि घर पठाउने प्रक्रियाले गर्दा कोभिड संक्रमितहरूको घरमै मृत्यु भइरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले बताए । हालै नेपाल बर्न सोसाइटीका अध्यक्ष डा.नारायणबहादुर थापाको समेत अस्पतालबाट घर फर्केपछि मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
दिनहुँ २० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण दर रहेको र यो दर विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा उच्च रहेको समेत डा. बीसीले बताए । देशभरि आइतबार जम्मा २० हजार १ सय ६६ सक्रिय कोभिड संक्रमित रहेको अवस्थामा १३ हजार ६ सय १२ जना होम आइसोलेसनमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
‘कोभिड पोजिटिभलाई नेगेटिभ हुन धेरै समय लाग्छ, होम आइसोलेसनको तथ्यांक नै छैन, उनीहरू कसरी ठीक भए भन्नेबारे जानकारी अभाव देखिएको छ,’ डा. बीसी भन्छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य संरचनामा भर्ना भएकालाई निको भएको भन्न सकिए पनि होम आइसोलेसनमा रहेकालाई थप अनुगमन आवश्यक छ ।
मुलुकमा हालसम्म २ लाख २० हजार ३ सय ८ जनालाई प्रयोगशाला प्रमाणित कोभिड देखिएकामा १ हजार ३ सय २१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १ लाख ९९ हजार २४ जना निको भएका छन् । अहिले मुलुकमा २० हजार १ सय ६६ जना सक्रिय कोभिड संक्रमित छन् । यो हालसम्म देखिएको संक्रमणको ९.१ प्रतिशत हो ।
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ ०९:०५
हावाहुरीले त्रिशूलीमा निर्माणाधीन दुई पुलमा क्षति
कोलम्बो जेलका २६ महिला कहिले छुट्लान् ?
निकुञ्जभित्र बिनाअनुमति बाटो निर्माण